Day 01 ~ ရန်ကုန် - စကာင်္ပူ ( - / - / ညစာ )
ပထမရက်မှာတော့ Nature Link Travels and Tours ၏ ခရီးသွားအုပ်စုခေါင်းဆောင်နှင့် ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်ရပ်တွင် တွေ့ဆုံ၍ MNI Airline လေကြောင်းခရီးစဉ်ဖြင့် စကာင်္ပူနိုင်ငံ ချန်ဂီ အ ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်သို့ ပျံသန်းရောက်ရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။ လေဆိပ်တွင် ဒေသဆိုင်ရာဧည့်လမ်းညွှန်မှ လာရောက်ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ပြီး စကာင်္ပူနိုင်ငံ၏ အထင်ကရနေရာများဖြစ်သော City Hall, Suntec City, Merlion Park, Peninsula Plaza (Little Myanmar) စသည့်နေရာများသို့ လှည့်လည်ကြည့်ရှုလည်ပတ်ပါမည်။ ညစာကို ဒေသဆိုင်ရာ စားသောက်ဆိုင်တွင် အရသာရှိစွာ သုံးဆောင်ကြပါမည်။ ညစာသုံးဆောင်ပြီးပါက ဟိုတယ်တွင် Check – In ၀င်ရောက်ကာ တစ်နေ့တာ ပင်ပန်းသမျှကို အေးချမ်းစွာ အိပ်စက်အနားယူ ကြပါမည်။
Day 02 ~ Singapore Universal Studios – Wings of Time 7.40PM Show (မနက်စာ/နေ့လည်စာ/ညစာ)
ဟိုတယ်တွင် Buffet ဖြင့်နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီးပါက စကာင်္ပူနိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံး စိန်ဆိုင်နှင့် အလုပ်ရုံ သို့ သွားရောက်လေ့လာကြပါမည်။ ဆက်လက်၍ ရိုးရာတိုင်းရင်းဆေးနှင့် အလှကုန်ပစ္စည်းများဝယ်ယူနိုင်ရန် Beauty Collagen Products Gallery သို့ပို့ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့နောက် ကမ္ဘာကျော်ရုပ်ရှင်သရုပ် ဆောင်များ၏ ပုံစံတူများနှင့် အခြားသော စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် ကစားနည်းများကို ပါဝင်ဆင်နွှဲနိုင်ရန် Universal Studio သို့သွားရောက်လည်ပတ်ကြပါမည်။ နေ့လည်စာကို Universal Studio ရှိ Food Hall တွင် သုံးဆောင် ကြပါမည်။ နေ့လည်စာသုံးဆောင်ပြီးပါက Universal Studio တွင်ဆက်လက်လည်ပတ်ကြပါမည်။ ညစာကို Sentosa Resturant တွင် အရသာရှိစွာ သုံးဆောင်ကြပါမည်။ ညစာသုံးဆောင်ပြီးပါက Outdoor Night Show Award ရရှိထားသော သံစဉ်များနှင့် ကပြဖျော်ဖြေမည့် WING OF TIME ကိုကြည့်ရှုခံစားကြမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့နောက် ဟိုတယ်သို့ပြန်၍ တစ်နေ့တာပင်ပန်းသမျှကို အေးချမ်းစွာ အိပ်စက်အနားယူကြမည်။
Day3~ Santosa Island ~ GARDEN RHAPSODY @ Supertrees (မနက်စာ/နေ့လည်စာ/ညစာ)
ဟိုတယ်တွင် Buffet ဖြင့် သုံးဆောင်ပြီးပါက ဟိုတယ်မှထွက်ခွာလာပြီး Sentosa Island သို့ Cable ကားဖြင့် သွားရောက်လည်ပတ်ကြပါမည်။ Sentosa ကျွန်းသည် အပူပိုင်းဒေသကို ရောက်သွားသကဲ့သို့ သဲနှင့် ပင်လယ်တို့တွင်များစွာသော Attraction များဖြင့် ခရီးသွားများအားဆွဲဆောင်နေပါသည်။ Sentosa Island တွင်ပျော်ရွှင်စွာ လည်ပတ်ပြီးပါက 3D ပန်းချီကားများဖြင့် ဓါတ်ပုံရိုက်ရန် TRICK EYES MUSEUM Singapore သို့သွားရောက်ကြပါမည်။ ဆက်လက်၍ Chocolate Gallery သို့သွားရောက်ကာ အိမ်အပြန် လက်ဆောင် အ တွက် ချောကလက်များ ၀ယ်ယူနိုင်ပါသည်။ နေ့လည်စာကို Singapore BBQ ဖြင့် သုံးဆောင်ကြပါမည်။ နေ့ လည်စာသုံးဆောင်ပြီးပါက Gardens by the Bay သို့သွားရောက်ကာ ဓါတ်ပုံများစိတ်ကြိုက်ရိုက်ကြပါမည်။ ည စာကို ဒေသအစားအစာများဖြင့် သုံးဆောင်ကြပါမည်။ ထို့နောက် ဟိုတယ်သို့ ပြန်၍တစ်နေ့တာ ပင်ပန်းသမျှ ကို အေးချမ်းစွာ အိပ်စက် အနားယူကြပါမည်။
Day4~ စကာင်္ပူ ~ ရန်ကုန် (မနက်စာ/ - / -)
ဟိုတယ်တွင် နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီးပါက Check – Out လုပ်၍ ချန်ဂီလေဆိပ်သို့ ထွက်ခွာလာပြီး Tiger Air လေကြောင်းခရီးစဉ်ဖြင့် ရန်ကုန်မြို့သို့ ပြန်လည်ထွက်ခွာလာမည်ဖြစ်ပါသည်။
တစ်ဦးလျှင်ခရီးစဉ်ဈေးနှုန်း – USD 708 (4* Hotel)
ရန်ကုန် ~ စကာင်္ပူ ~ ရန်ကုန် အသွားအပြန်လေယာဉ်လက်မှတ်။
၃ ညစာ ကြယ်လေးပွင့် ဟိုတယ်တွင် တည်းခိုခ။
ခရီးစဉ်တွင် ဖော်ပြထားသော မနက်စာ၊ နေ့လည်စာ၊ ညစာ။
ဒေသခံ အင်္ဂလိပ်စကားပြော ဧည့်လမ်းညွှန်။
ခရီးစဉ်တစ်လျှောက်လည်ပတ်ရန် Air-Con Car.
ဧည့်လမ်းညွှန်နှင့် ကားဒရိုင်ဘာအတွက် Tip Money.
ခရီးစဉ်တွင်မဖော်ပြထားသော အစားအသောက်နှင့် အဖျော်ယမကာများ။
ဟိုတယ်တွင် Mini Bar အသုံးပြုခများ။
ခရီးစဉ်တွင် မပါဝင်သော နေရာများသို့ လည်ပတ်ခြင်း။
သတ်မှတ်အလေးချိန်ထက် ပို၍ုသယ်ဆောင်သော ၀န်ပိုခများ။